Cajiibka Islamabad Khabiir - Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Qalab Qaadista Webka
A mashiinka raadinta crawler waa codsi automated, script ama barnaamij ka baxa World Wide Web si nidaamsan barnaamijka si ay u bixiyaan macluumaad cusbooneysi ah mashiinka raadinta gaar ah. Weligaa ma yaabtay sababta aad u heshay natiijooyin kala duwan mar kasta oo aad ku qorto ereyada isku midka ah ee Bing ama Google? Sababtoo ah websaytka ayaa lagu soo dajiyay daqiiqad kasta. Iyo sida ay u soo gelayaan websaytiyadaha webka oo ku dul wareegaya boggaga cusub ee cusub.
Michael Brown, oo ah khabiir hormood ah oo ka socda Semaat , wuxuu sheegayaa in mashiinnada webka, oo sidoo kale loo yaqaano calaamadaha tooska ah iyo caarooyinka webka, ay ka shaqeeyaan algorithms kala duwan ee makiinadaha raadinta kala duwan - moduprost extra power. Nidaamka naqshadeynta webka wuxuu ku bilaabmaa aqoonsiga URL cusub oo la soo booqdo midkood sababtoo ah waa la soo rogay ama sababtoo ah qaar ka mid ah boggooda internetka ayaa leh content cusub. URL-yada la aqoonsaday waxaa lagu magacaabaa miraha ereyga raadinta.
URL-yadaas ayaa ugu dambeyn soo booqday oo dib loo booqday iyada oo ku xiran hadba inta jeer ee marxaladdan cusub lagu soo rogay iyaga iyo siyaasadaha hagaya curinta. Inta booqashadu socoto, dhammaan hyperlinks on kasta oo ka mid ah bogagga shabakadda ayaa lagu aqoonsaday oo lagu daray liiska. Waqtigan xaadirka ah, waxaa muhiim ah in lagu sheego shuruudo cad oo ah in makiinadaha raadinta ee kala duwan ay isticmaalaan algorithms iyo siyaasado kala duwan. Tani waa sababta ay u kala duwanaan doonaan natiijooyinka Google iyo natiijooyinka Bing ee isla ereyada isku mid ah inkastoo ay jiri doonaan waxyaabo isku mid ah.
Daraasaduhu waxay sameeyaan shaqooyin waawayn oo ku saabsan makiinadaha raadinta si joogto ah. Dhab ahaantii, shaqadoodu way adag tahay sababtoo ah saddex sababood oo hoose.
1. Muujinta bogagga internetka ee internetka waqti kasta oo la siiyay. Waad ogtahay in ay jiraan dhowr malaayiin ah oo ku yaalla websaydh waxaana badanaa la bilaabaa maalin kasta. Inta badan mugga mareegta shabakada, way sii adkaaneysaa in ay gurguurto si ay u noqoto mid soo kabasho ah.
2..Hawlaha loo bilaabay boggaga internetka. Ma leedahay wax fikrad ah inta websaydhka cusub la bilaabay maalin kasta?
3. Inta jeer ee isbeddelka xitaa laga beddelo xitaa bogagga internetka ee hadda jira iyo in lagu daro boggaga firfircoon.
Kuwani waa seddexda arrimood ee ku adkeynaya caarooyinka webka in ay noqdaan kuwo hadda socda. Halkii laga heli lahaa shabakadaha shabakadda ee ku salaysan kowaad ee ugu horeysay ee loo adeego, badanaa shabakadaha websaydhku waxay kala hormariyaan bogagga shabakadaha iyo hyperlinks. Mudnaansiinta waxay ku saleysan tahay kaliya 4 nidaamyada baaritaanka raadraaca guud.
1. Nidaamka xulashada waxaa loo isticmaalaa xulashada boggaga la soo dejiyey markii ugu horeysey.
2. Nooca siyaasadda dib u booqashada waxaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo goorta iyo inta jeer ee bogagga bogagga dib loo eegayo isbeddelada suurtagalka ah.
3. Siyaasadda is barbardhiga ayaa loo adeegsadaa si loo isku duwo sida looxa loo qaybiyo si loogu daboolo dhamaanba abuurka.
4. Nidaamka Nabadgelyada waxaa loo adeegsadaa sida loo dejiyo URL-yada lagu dhajiyo si looga fogaado xad-gudubyada bogagga
Si dhakhso ah oo sax ah ee abuurka ah, gawaarida waa in ay leeyihiin farsamooyin fara badan oo u oggolaanaya mudnaanta iyo hoos u dhiga bogagga shabakadda, waana inay sidoo kale leeyihiin qaab dhismeed oo aad u fiican. Labadani waxay u fududeyn doonaan in ay gurguuraan oo ay soo dejiyaan boqolaal malaayiin oo bogag ah dhowr toddobaad.
Xaalad ku habboon, bog kasta oo webka ah waxaa laga soo rogaa World Wide Web waxaana lagu qaadaa fiidiyo-xambaarsan ka dib markaa, bogagga internetka ama URL-yada ayaa la duubay ka hor intaysan ku dhaafin jadwal u go'an mudnaanta. URLska mudnaanta leh waxaa lagu qaadaa marar badan si loo soo dhejiyo si ay metadata iyo qoraalka loo kaydiyo si habboon loo gurguuro.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira dhowr mashiinno farsamoyaqaan ama raadiyayaashi. Midka uu isticmaalo Google waa Google Crawler. Iyadoo aan lahayn xakamaynta shabakadaha, natiijooyinka natiijada gawaarida raadinta waxay soo celineysaa natiijooyinka eber ama waxyaabaha aan ka fogeyn tan iyo markii bogagga cusub ee cusub aan waligood la qorin. Dhab ahaan, ma jiri doonto wax sida cilmi baaris online ah